Apple zụta mmalite Emotient | Esi m mac
Dabere na Wall Street Journal, Apple ga-enweta n'oge na-adịbeghị anya obere mbido akpọrọ Emotient onye dabere na azụmaahịa ya n'iji teknụzụ njirimara maka mgbasa ozi na ụlọ ahịa ahịa. Ọbụna ule ka emekwara na ngalaba ahụike maka nyocha mgbu.
Na mgbakwunye, ebe nrụọrụ weebụ Emotient kwalitere ike nke teknụzụ ya weghachite mmeghachi omume nke mmetụta uche kpọmkwem site n'aka ndị ahịa. Nanị obi abụọ nke na-awakpo m bụ otu Apple ga-esi jikọta ọdịdị ihu a dabere na mmetụta uche na ngwanrọ iji kpokọta data na-enweghị mmetụta nzuzo nke onye ọrụ, ikekwe ọ dọrọ aka ná ntị na mbụ na a ga-eji ọnụ ọgụgụ teknụzụ na-enweghị aha na teknụzụ a n'etiti. .. anyị ga-ahụ.
N'okwu ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya:
Ojiji nke mmetụta uche na nyocha ya na-esote dị iche iche ma dị iche na ibe ya dị ka àgwà nke ndị ahịa anyị. N'ebe enwere igwefoto, enweghi ụkọ nyocha vidiyo nke ngosipụta, ohere iji mụta banyere steeti ndị ahịa na ihe ha chere ka ha na-emeghachi omume n'ụzọ mmetụta uche na ahụmịhe ahịa na ọrụ ahịa.
Costgwọ nke nnweta a bụ ka amaghi, mana dịka ozi niile sitere na mbipụta dị iche iche O yiri ka ha kwadoro akụkọ ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị amatala na Apple nwere mmasị n'ụdị nka na ụzụ ebe ọ bụ na ọnwa anọ gara aga ọ zụtara ụlọ ọrụ ọzọ yiri atụmatụ akpọrọ Faceshift, otu ụlọ ọrụ Switzerland nke ọkachamara na ntanetị dabere na njide akụkụ atọ. Ọbụna na 2010, Apple nwetakwara ụlọ ọrụ ihu ihu Swedish Polar Rose.
Ebumnuche Apple edoghị anya, mana o yiri ka ọ bụ ihe nwere oké ọchịchọ ọ bụghị naanị dị ka njikọta nke atụmatụ ọhụrụ anọ gụrụ na nsụgharị ndị ọzọ na-esote nke usoro ahụ, mana enwere ike ịgbatị ya na mpaghara dịka nchekwa biometric, dịka ọmụmaatụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple zụtara mmalite Emotient iji zụlite ngwanrọ dabere na ihu ihu
Apple ga-akagbu kpam kpam otu onye ọrụ na December 17